ကျမနဲ့ကာမတဏှာ၊၀ါးခယ်မ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျမနဲ့ကာမတဏှာ၊၀ါးခယ်မ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ
ဦးနုကို ကျမစသိတာ အိုးဝေဂျာနယ်ထဲက ကာတွန်းရုပ်ပြောင်တွေထဲမှာပါ။ ပြည်ပြေးဦးနုက ပုတီးလုံးအကြီးကြီးနဲ့ စိပ်ပုတီးကြီးကို လည်မှာဆွဲပြီး တဖက်နိုင်ငံကိုပြေးတဲ့ ပုံနဲ့ လှောင်ပြောင်ထားတဲ့ ကာတွန်းဖြစ်ပါတယ်။
လူကို တွေ့ဖူးလိုက်တာကတော့ ကျမ ၆တန်းလောက်မှာ ဦးနုပြည်ပြေးရာက ပြန်လာပြီး ၀ါးခယ်မဘုရားကြီးထဲမှာ ပူဇော်ဖို့ စွယ်တော်ပင့်လာပေးတုံးကပါ။ အိမ်ရှေ့က လူအုပ်ကြီးနဲ့အတူ ဖြတ်သွားတဲ့ ခေါင်းပေါင်းနဲ့ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလူကြီး၊သူ့ကို လူတွေက တရိုတသေနဲ့၊အိမ်ရှေ့ကအဖြတ် ကျမနဲ့အတူ ရပ်ကြည့်နေတဲ့ အဖေ့ကို ဂေါပကလူကြီးတွေက လက်ညှိုးညွှန်ပြီး မိတ်ဆက်ပေးသွားကြတယ်။ အဖေကလည်း ရိုရိုသေသေ ဦးညွတ်လို့။အဲဒီလူကြီးကလည်း ပြုံးပြ နှုတ်ဆက်သွားတယ်။
ကျမနဲ့ ကာမတဏှာစာအုပ် ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံခြင်း
ကျမတို့ ၉တန်းစာမေးပွဲဖြေနေဆဲ Chemistry မဖြေရခင်ည စာကျက်နေတုန်း `မီးဗျို့….မီး…မီး´အော်သံနဲ့ သံချောင်းခေါက်သံတွေ ကြားလိုက်ရတယ်။ ကျမတို့နေတဲ့ ရေကျော်ရပ်ကွက်နဲ့ ကပ်နေတဲ့ ဆေးရုံရပ်ကွက်မီးလောင်တာ။ အကြီးအကျယ်ပါပဲ။ ကြောက်လိုက်တာလေ။
ညသန်းခေါင်ကျော်မှာ မီးငြိမ်းသွားတော့ အိမ်မှာ ပွထကျန်ခဲ့လို့ နည်းနည်းဝေးတဲ့ အဒေါ့်အိမ်မှာ စာသွားကျက်ရတယ်။
နောက်နေ့တော့ စာမေးပွဲတွေ ၃ရက် ရွှေ့ပေးလိုက်တယ်။
နောက်ရက်တွေမှာ အဲဒီရပ်ကွက်က မီးလောင်ခံရတဲ့သူတွေ သူတို့ အိမ်နေရာကို လာရှင်းကြတယ်။သီရိမင်္ဂလာလမ်းထဲက မြတ်ရတနာ စာပုံနှိပ်တိုက်က မီးလောင်ခံရတဲ့ စာအုပ်တွေကို ကျမတို့ အိမ်ဒေါင့်က အမှိုက်ပုံမှာ လာပစ်တယ်။
စာမေးပွဲအပြီး ဖတ်စရာ ရှာနေတဲ့ ကျမ အဲဒီ မီးတ၀က်တပျက်ကျွမ်းနေတဲ့ စာအုပ်တွေထဲက ဖတ်လို့ရတာ ရှာဖွေတော့ စာအုပ်၂အုပ်ရတယ်။
မောင်ကိုကိုရဲ့ ခေါင်းလောင်ထိုးသံ ဘယ်သူ့ထံ ဘာသာပြန်စာအုပ်နဲ့ ဦးနုရဲ့ ကာမတဏှာပါ။
၂အုပ်လုံးကောင်းလွန်းလို့ လက်ကမချစတမ်း ဖတ်မိတော့တာပဲ။
အထူးသဖြင့် ဦးနုရဲ့ ကာမတဏှာဝတ္ထုထဲက သာသနာ့ရိပ်သာမှာ တရားအားထုတ်ပြီး ဉာဏ်စဉ်နာရတယ် ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်ကို ဉာဏ်စဉ်နာတယ်ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှန်းမသိပဲ ကြိုက်မိပြီး အပြန်ပြန်ဖတ်မိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အမေသိသွားတဲ့အခါ နိမိတ်မရှိ မီးလောင်တဲ့ စာအုပ်တွေ အိမ်သယ်ရပါ့မလားလို့ ဆူတာနဲ့ နှမျောတသစွာ သွားစွန့်လိုက်ရပါတယ်။
ကြာတော့လည်း စာအုပ်ရောရိပ်သာဆိုတာကိုပါ မေ့သွားပါတယ်။
၁၉၉၉ မှာတော့ အမ၀မ်းကွဲ တယောက်နဲ့ အတူ ဥပုသ်နေ့တွေမှာ ဟံသာဝတီရိပ်သာကို သွားပြီး တရားနာစပြုလာပါတယ်။ဒါပေမယ့် တရားပွဲအပြီး တရားထိုင်ရတာ တနာရီကို အပန်းတကြီးပါပဲ။
အဲဒီအချိန် ဟံသာဝတီရိပ်သာဆရာတော် ဦးပညာဝံသက တရားဟောလည်း ကောင်းတော့ တရားနာ ပရိသတ်စည်ကားပါတယ်။ မဟာစည်ရိပ်သာကတော့ အဖွားကြီး ယောဂီတသိုက်ပဲရှိပါတယ်။
အဲဒီနှစ်မှာပဲ အိမ်နားက မိတ်ဆွေ ကိုဝေရဲ့ လက်ထဲ ဦးနုရဲ့ ကာမတဏှာ စာအုပ်ကို တွေ့လိုက်ရတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကွဲကွာနေတဲ့ မိတ်ဆွေဟောင်း တွေ့လိုက်ရသလိုပဲ။
ကိုဝေ့ဆီက သူ့အဖေရဲ့ စာအုပ်ကို တောင်းပြီး အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ဖတ်မိပါတယ်။ဖတ်ရင်းလည်း အဲဒီ စာအုပ်ထဲက ၀ါးခယ်မ မဟာစည်ရိပ်သာမှာ တရားအားထုတ်ကြည့်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပါပဲ။
၀တ္ထုထဲက မောင်သိန်း၊မခင်မေ၊မောင်မြင့်နဲ့ ဆွေမျိုးတွေ ကာမတဏှာတောက လွတ်အောင်၊လောကဓံတွေ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် သာသနာ့ရိပ်သာမှာ အားထုတ်သွားကြသလို ကျမလည်း အားထုတ်ကြည့်ချင်တယ်။
ကျမနဲ့ ၀ါးခယ်မ မဟာစည်ရိပ်သာ
၀ါးခယ်မ မဟာစည်ရိပ်သာက ယောဂီတွေအတွက် သပ္ပါယမျှတအောင် စနစ်တကျတည်ဆောက်ထားတာပါ။ရေကန် ကို ၀ိုင်းပြီး ပတ်ထားတဲ့ စင်္ကြန်လမ်းနဲ့ ယောဂီဆောင်တွေဟာ ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပျော်မွေ့ဖို့ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။
ကျမရဲ့ဖွားလေးက သာသနာ့ရိပ်သာရဲ့ အမာခံ ယောဂီပါ။
ဖွားလေးက တရားအားထုတ်ရင် ၀ါခေါင်လက အကောင်းဆုံးတဲ့။
ဒါနဲ့ ၀ါခေါင်လဆန်းရက်မှာ အဖေရန်ကုန်သွားတုန်း အဲဒီရိပ်သာက ယောဂီကြီး အဘရှမ်းကို တရားအားထုတ်ကြည့်ချင်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
(ဖွားလေးကို တမင်မပြောတာ။ဘယ်သူမှ မသိပဲ တိတ်တိတ်လေး တရားဝင်ချင်လို့)
ဘရှမ်းက အားတက်သရောပဲ ဆရာတော်ကို လျှောက်ပေးပါမယ်လို့ ကတိခံတယ်။
အဲဒီနေ့ပဲ ဘရှမ်းလွှတ်လိုက်တဲ့ အမ မွှေးမွှေးက ပွဲရုံကို လာပြီး တရားအားထုတ်ရင် ဘာပစ္စည်းတွေ ယူသွားသင့်တယ်။ အိပ်ရာနိုးတာကနေ အိပ်သည်ထိ ရှုမှတ်တာ မပြတ်ဖြစ်နေဖို့ အရေးကြီးကြောင်းနဲ့ ဘယ်လိုနေ၊ဘယ်လိုမှတ်၊ဘယ်လိုစားဆိုတာတွေပါ လာသင်ပေးသွားပါတယ်။
အင်မတန် ကျေးဇူးများလွန်းလို့ နေ့စဉ် ကျေးဇူးရှင်တွေအဖြစ် ကန်တော့မိပါတယ်။
နောက်တနေ့တော့ ဘရှမ်းက ညနေဖက် ထမင်းစားထားဆိုပြီး ဆိုက်ကားနဲ့လာခေါ် ပေးပါတယ်။
အိမ်က အတွင်းပစ္စည်းတွေ ထုပ်ပိုးပြီး ညီမ၀မ်းကွဲကို အပ် ၊အိမ်ကိုလည်း သိန်းသိန်းဆိုတဲ့ အမကြီးနဲ့ အပ်ပြီး ပစ်ထားခဲ့တာပါပဲ။
ရိပ်သာဆရာတော် ဘဘုန်းဘဒ္ဒန္တတိလောက ကို အဲဒီတော့မှ တွေ့ဖူးတာပါ။
(နောင်တော့ ဘဘုန်းက ငါ့သမီး၊ကျောင်းပေါ်တက်လာတုန်းက ယောဂီတဘက် စလွယ်သိုင်းတက်လာတာလို့ ပြောပါတယ်)
ရိပ်သာမှာ အရင်ရောက်နေတဲ့ အမကြီး မတင်ဝင်းနဲ့ တောက အဒေါ်ကြီးတယောက်တို့နဲ့ အတူ ၉ရက်အားထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။
(စ၀င်ကတည်းက အဖေမရှိတုန်း ရက်ကလေးကို လုဝင်ရတာ၊အဖေပြန်ရောက်မယ့်ရက်ကျ ထွက်မယ်လို့ တွက်ပြီး ၀င်တာ၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း မြတ်မင်္ဂလာထဲက ကိုယ်တွေ့ဆောင်းပါးတွေလို
တရားအားထုတ်တာနဲ့ ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် တရားတွေ့တယ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်မှာပဲလို့ အထင်ကြီးမိလို့၊)
အဲဒီ ၉ရက်အားထုတ်လိုက်ရတာ နည်းလမ်းတကျ လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ ကလျာဏမိတ္တနဲ့တွေ့ခွင့်၊ ယောဂီညာ မဟုတ်ပဲ တကယ့်ကို ထိထိရောက်ရောက် အားထုတ်ခွင့် ၊ယောဂီနည်းချိန် အနီးကပ်သေချာသင်ပြတဲ့ ဆရာကောင်းနဲ့ ဆုံစည်းခွင့်၊တရားအရသာကို လက်ညှိုးလေးနဲ့ တို့မြည်းခွင့်၊ သတိပဋ္ဌာန်လမ်းကိုလျှောက်ခွင့် ရခဲ့တဲ့ အတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် အကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို အကျိုးကျေးဇူးတွေရအောင် လမ်းစပေးခဲ့တဲ့ ဦးနု၊ကာမတဏှာဝတ္ထုနဲ့ ၀ါးခယ်မ မဟာစည်ရိပ်သာ တို့ကိုတော့ တသက်လုံးအမှတ်ရကျေးဇူးတင်နေမိမှာပါ။
သူကြီးက ဦးနုဆိုရင်လည်း မကြိုက်ဘူး။
တရားအားထုတ်တယ်ဆိုလည်း တီကိုဆားနဲ့ ပက်သလိုပဲ။
ရိပ်သာဆိုရင် ဆေးခါးကြီးကို မတ်ခွက်နဲ့ အပြည့် အတိုက်ခံလိုက်ရသလို။
အစကတော့ ရွာထဲမှာ ဒီအကြောင်း မတင်ပဲ ရှောင်မလို့
အခုတလော သူ့ကို ရွာထဲ မတွေ့တာနဲ့ ရန်စပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။
ယူအက်စ်ရောက်တော့.. သူ့အကြောင်းတချို့.. သိလာတာနဲ့..မကြိုက်တော့တာ…
၁ခုက.. သူ့ဖာသူအေးချမ်းစွာ.. ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကို… နိုင်ငံတော်ဘာသာထလုပ်လို့.. တိုင်းရင်းသားတွေ တစစီကွဲကုန်တာ…။ လက်နက်စွဲပြီး.. စစ်တိုက်တာက.. တပိုင်း..။ စိတ်ဓါတ်ရေးရာကို ဖျက်စီးလိုက်တာက.. အဆိုးတကာ့အဆိုးဆုံးပဲ..။
အခု ကေအိုင်အေ ကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့.. အစပဲ..။
၈၈ မှာ… ကျွန်တော်သာလျှင် တရားဝင်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပါကြောင်း.. ထကြေငြာတာ..။
အနည်းဆုံး.. ဗကသ..။ ဒေါ်စုတို့နဲ့ ညှိလုပ်သင့်သပေါ့..။
သူက တကိုယ်တော် မတိုင်ပင်ပဲ.. ထလုပ်သမို့.. အဲဒီအချိန်ကစုစည်းနေမှုမှာ.. အက်ကြောင်းပေါ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်..။
( ဦးနုကို.. ယူအက်စ်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက လုံးဝမကြိုက်ပါ..။ အဲဒါကြောင့်.. ဦးနုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ အဲဒီခေတ်က.. အစိုးရဖွဲ့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်..( ခေတ္တဖြစ်ဦး..) နိုင်ငံတကာက.. အသိအမှတ်ပြုမယ်မဟုတ်ပါ။)
ဘာမှမလုပ်.. အချိန်ပြည့်.. အချိန်ယူ… ငုတ်တုတ်တရားထိုင်တာကို.. မကြိုက်တာပါ..။
( ပုဂ္ဂလိက အနေနဲ့ကတော့.. မိမိကိုယ်တိုင်.. ညတိုင်း(တိုင်း) တရားထိုင်ပါကြောင်း)
တည့်တည့်ပြောရရင်.. နိုင်ငံခြားသားတွေကို(သာ).. ငွေယူပြီး.. ထရိန်နင်ပေးရင်ကြိုက်ပါတယ်..။
ဦးဂိုအင်ဂါ ပြောလေ့ရှိသလို ..ဗုဒ္ဓဘာသာ နာမယ်မခံရင်.. ပိုကောင်းသပေါ့..။
ဂေါတမဗုဒ္ဓလက်ထက်က.. တရားရိပ်သာဖွင့်.. ၀ိပဿနာကြတာ.. မရှိရေးချ.. မရှိ..။
ဗုဒ္ဓဘာသာ.. လုပ်ထုံးဓလေ့… မဟုတ်..။
ဘုရားမဖြစ်ခင်.. သိဒ္ဓတမင်းးသားဘ၀ကတော့.. ရိပ်သာတရားစခန်းဝင်.. တရားထိုင်ခဲ့တာရှိပါကြောင်း…။
ပြောရရင်.. ဒီခေတ်ကြီးက.. သာသနာရောင်ဝါ.. အထွန်းအတောက်ဆုံးဆိုကြတယ်..။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေနဲ့များ ယှဉ်ထိုးရင်.. မွဲလိုက်တာမှ.. ချာလို့…။ ဖြစ်လိုက်တဲ့.. ကွန်ဖလစ်တွေကလည်း.. ကမ္ဘာတန်း.. အဆိုးဆုံးချည်း..
အင်း.. သာသနာ(အဆုံးအမ) အထွန်းတောက်ဆုံးမို့သာပဲ..
ကျမ အခု မအားသေးဘူး။
ပြန်လာမှ သူကြီးကို ဆက်ဆွေးနွေးမယ်။
ဒီကြားထဲ ကျမကိုယ်စား ရွာသားတွေ သူကြီးနဲ့ ဆက်ငြင်းပေးကြပါ။
အဲစာအုပ် ဒီကိုတော့ သယ် လာတယ်။။
အသိညာဏ်ကွာသလားမသိ အဲဒီ ဝါးခယ်မ မဟာစည် သာသနာ့ ရိပ်သာ အကြောင်း သတိ မမူမိ။
အာ့ကြောင့် ပြောတာ ….
ကျနော့ စာဖတ်ပုံက သေတ္တာဖွင့်ပြီး ပြန်ပိတ်လိုက်သလိုပဲ ဆိုတာ။
ဖတ်ပြီး ခေါင်းထဲ ဘာမှ မရှိဘူးးး
.သူရေးတဲ့စာအုပ်ထဲတော့ “ရက်စက်ပါပေ့ကွယ်” ဆိုတာဖတ်ဖူးတယ်..ကျုပ်ကို .အာတီဒုံပဲလက်ဆောင်ပေးတာပဲ
အခုမှ စ.. ငြင်းမလို့ပဲ ရှိသေးတာဆိုတော့
.ဘယ်သူတွေလဲ ကျုပ်ဘကြီးကို မကြိုက်ဖူး .. ပြောကြတာ….
.ကျုပ်ဘကြီးလောက် လူရည်လည် ဥာဏ်ရည်မြင့်တာ ရှာပဲ ရှာကြည့်ပါဦး…
.ဘာဝါဒမှ တည်တည်တံ့တံ့ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မရှိပဲ
.လူကြိုက်အောင်လုပ်ရုံ လူကြိုက်အောင်နေတတ်ရုံ လူများစုအကြိုက်စကားပြောတတ်ရုံနဲ့
.ပတ်ဝန်းကျင်က အဓိက ကီးတွေကို မြင်တတ်ပြီး လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်ဆွဲစေ့တတ်တာ
.အထူးသဖြင့်တော့ ဂျပန်ခေတ်အပြီးမှာ လုံးဝမြုပ်နေရာကနေပြီး မိုးပေါ်ကကျ ၊
.လွပ်လပ်ရေးရကာစအချိန်မျိုး လုပ်စရာတွေကများ အင်မတန်အလုပ်ရှုပ်လွန်းလို့
.ခေါင်းပေါင်းစတလူလူနဲ့ ငွေဖလားကြီးပိုက်ပြီး အလှူခံထွက်ပြရင်း
.တိုင်းပြည်အတွက် အင်မတန်အရေးကြီးလိုအပ်တဲ့ အမဲသား ကို လိုင်စင်ပိတ်ပြီး
.တိုင်းပြည်အကျိုးကို ချောင်ထိုးပြီး လူကြည်ညိုအောင်လုပ်ပြတာ…
.မောင်တော (မောင်းတော) ကမဲ လိုချင်လို့ အမတ်လိုချင်လို့ …….&*#$@ တာ….
.ပညာတတ် လူတော်တွေများတဲ့ကွန်မြူနစ်ဂိုဏ်းကို အဲသည်အချိန် အင်မတန်အားကောင်းတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ဂိုဏ်းနဲ့ *^%$#@
.ဒီလောက်နဲ့ တော် ….
.ဒါမျိုး နောက်မပေါ်တော့တာ ဒေါ်စုတို့ ၈၈ တို့ ကံကောင်းတယ်မှတ်….
ဦးနုရဲ့ ကာမတဏှာစာအုပ် မဖတ်ဖူးသေးဘူး … ရှာဖတ်ကြည့်အုန်းမှပဲ …
တကယ်တော့ တကယ်တရားအားထုတ်ရတဲ့ ရိပ်သာတွေမှာ သွားကြည့်လိုက်ပါ .. အမြဲတမ်းနေပြီး တရားအားထုတ်နေသူများရှိသလားလို့ ..
အသက် ၅၀ လောက်ရှိနေတဲ့ လူတွေကို လိုက်မေးကြည့်ပါ .. သူတို့တစ်သက်မှာ ရိပ်သာမှာ ဘယ်နှစ်ရက်များနေဖူးလဲလို့ …
ကျွန်မသာ ကုမဏီပိုင်ရှင်ဆိုရင် ၀န်ထမ်းတွေကို တရားစခန်းဝင်ခိုင်းမှာ .. သူ့အလှည့်နဲ့သူပေါ့ … အဲဒါမှ သူတို့စိတ်စွမ်းရည်တက်ပြီး အလုပ်မှာ ပိုအသုံးတည့်မှာ ..
ဒီ ပို့(စ) မှာ ပြောပါဦးမယ်။
ခု ဘာသာရေး အတွက် ဆိုပြီး အင်မတန်အစွန်းရောက်နေတဲ့ သူတွေကလည်း အပေါ်ယံ ကိုယူပြီး အကျယ်ချဲ့နေသလိုပဲ…
ဗုဒ္ဓဘာသာကို လက်ညှိုးထိုးချင်တဲ့သူတွေကလည်း အပေါ်ယံ အကြောင်းပြချက်တွေကို ပြပြီး လက်ညှိုးထိုးဖို့ ကြိုးစားနေတာဖြစ်နေပြီ။
တရား ဆိုတာ ပြောရုံ ဆွေးနွေးရုံ၊ ငြင်းခုံရုံ၊ သင်တန်းတက်ရုံ၊ သင်ပေးသင်ယူရုံနဲ့ ရတာမှ မဟုတ်…
ကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံကြည့်၊ အားထုတ်ကြည့်မှ ဆိုတော့ကာ ကိုယ်မလုပ်နိုင်သေးသရွေ့ ဘာမှ မပြောဖြစ်တာ အကောင်းဆုံးများဖြစ်မလားးး
ဦးနုရဲ့ မိတ္တဗလဋီကာတော့ ကောင်းရှာပါတယ်
တရားထိုင်တာကတော့ ဒေါ်ဒေါ်ရယ် ကျစွာချောင်မှာ ကျောင်းပြီးခါစလောက်မှာ သင်္ကြန်တွင်းဆို ၁၀ ရက်စခန်း ၀င်တာ ၅ နှစ်ဆက်တိုက်လောက်ဝင်ဖူးတယ်
အနည်းဆုံး တော့ ဥပုသ်သီလလေးတော့ ရတာပဲ ဆိုပြီး အားတင်းဝင်တာ မဆိုးပါဘူး စိတ်အေးချမ်းတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က ကျစွာဆရာတော် ပျံလွန်တော်မူသွားပြီ
ခုများတော့ ဒေါ်ဒေါ်ရယ် အသက်ကြီးလေ လုပ်ချင်တာများလေနဲ့ ဟိုသွားချင်ဒီသွားချင်နဲ့ ခရီးထွက်ဖို့အရေး ဒီလို ပိတ်ရက်ရှည်လေးပဲ ရှိတော့ အဲ့ဖက်ကို မလှည့်နိုင်တော့ ဘူး
ခုနောက်ပိုင်းလည်း ဘာတွေ မအားမှန်းမသိဘူး အားရင်လည်း ခရီးပဲ ထွက်ချင်နေတော့တာ
ခုနေများသေရင် ကျွတ်ပါ့မလား ပဲ အစွဲတွေ များနေလို့
ပု… ပြောသလိုပဲ… ဦးနုရဲ့ မိတ္တဗလ ဋီကာကျမ်းလေး တော့ တော်တော် ကောင်းသား… မူရင်း ဒေးကာနက်ဂျီ ရေးလို့ ထင်တယ်… အဲစာအုပ်လေးရယ်… ဒေါက်တာကျော်စိန်ရဲ့ How To Deal With The Difficult People ရယ်ဆို မားကက်တင်း လုပ်စားလို့ ရပြီ…
ကာမတဏှာ စာအုပ်ကို ပဒုမ္မာ ငှားပေးလို့ ဖတ်ဖူးတယ်။
ကေဇီပြောသလိုပဲ ကိုယ့်ဥာဏ်အဆင့်နဲ့ တန်သလောက်ပဲ သိလိုက်တယ်။
ဆင်းရဲလေလေ သံဝေရရ ဆိုသလို….
အဖေဆုံးပြီးမှ စိတ်အေးချမ်းရာရှာရင်း လူပြောသူပြောနဲ့ ယောင်နနနဲ့ တရားစခန်းကို ရောက်ခဲ့တာ။
သဒ္ဓါတရားက အဲလောက် ကောင်းတာ။
ဒီပိုစ့်ကတော့ ဒီရွာရဲ့စတိုင်အတိုင်း သဂျီးနဲ့ အကြိတ်အနယ် ဒီဘိတ်လုပ်ရမယ့် ပိုစ့်ပဲ။
ဘာသာရေးလုပ်လို့ တိုင်းပြည်မွဲတယ်ဆိုတာကို လုံးဝလက်မခံဘူး။
ဘုရားဟောထဲမှာ လောကီလူသားတွေကို လောကထဲမှာ နေနည်းထိုင်နည်းတွေ ဟောကြားဆုံးမထားတာ အများကြီးပဲ။
သီတဂူဆရာတော်ကြီး ဟောဖူးသလို ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ အများပြည်သူသုံး ပလက်ဖောင်း။
မြတ်စွာဘုရားဟာ တရားတော်တွေကို တီထွင်တာ၊ ချမှတ်တာ မဟုတ်ဘူး။
သဘာဝဓမ္မတွေကို အမှန်အတိုင်း သိမြင်ပြီး၊ သူသိမြင်တဲ့အတိုင်း လူတွေသိအောင် ပြန်ဟောကြားပေးတာသာဖြစ်တယ်လို့ နားလည်ထားပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားချက်အရ ဘယ်လူမျိုး ဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတာဖြစ်မယ်။
မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတာဖြစ်မယ် လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
နတ်ပြည်၊ ဗြဟ္မာ့ပြည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေချည်းပဲ မဟုတ်ဘူးတဲ့။
မြန်မာလူမျိုးချည်းပဲ မဟုတ်ဘူး တဲ့။
.ကိုယ့်အမပိုစ့် ဆိုတော့ ….
.ဘဘကြီးကိုတော့ ပိုးစိုးပက်စက် ပြောပြီးသွားပြီ..
.အခု ရိပ်သာ အလှည့်…
.တချို့က ပြောတယ်… ဘုရားလက်ထက်မှာ လူတွေ တရားအားထုတ်တဲ့ရိပ်သာမရှိဘူး………….. တဲ့ ….
.အဲဒါတော့ မငြင်းပါဘူး (ကိုယ်မှမရောက်ဖူးပဲ … )
.ဒါပေသိ .. ဘုရားလက်ထက်မှာ မရှိတာက ရိပ်သာတင်မကဘူး …
.ပါတီကောင်စီ န၀တ နအဖ ထွေအုပ် လဲမရှိဘူး ..
.ကင်းကြေး ချောကြေး ကိုယ်ထူကိုယ်ထကြေး မိုက်ကြေး ဗိုလ်ကျကြေး တွေလဲ မပေးရဘူး..
.တီဗီ ဗီဒီယို ကက်ဆက် စီဒီ ဒီဗီဒီ ကာရာအိုကေ ကိုရီးယားကား သရဲကား ဟာသကားတွေလဲ မရှိဘူး…
.တစ်လုံး နှစ်လုံး သုံးလုံး နေ့တိုက် စုမဲ အလျော်အစားတွေလဲ မရှိဘူး
.ဘုရားလက်ထက်မှာ တရားအားထုတ်ဖို့ အိမ်က ထွက်ပြေးစရာမလိုဘူး လေ….။
ရိပ်သာ ဆိုလို့ ….
အဲဒါ တွေကို သဘောကျတယ်….
ရိပ်သာတစ်ခုလောက်များ ရှိရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲနော်….။
ရိပ်သာဆိုလို့ မနောကတော့ သင်္ကြန်တစ်နှစ်တုန်းက အောင်စကြာဓမ္မရိပ်သာမှာ တစ်ကြိမ်ပဲ ၀င်ဖူးပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ မ၀င်ဖြစ်တာ အတော်ကြာပြီ။
ညဏ်ဆင်ဆိုလို့ သဲအင်းဂူ ဆရာတော်ကြီး မဂ်လေးပါး တရားတွေနာပြီး ထိုင်တာ ညဏ်ဆင်တွေ တက်သဗျို့…. တက်တာမှ အောင်မငှီး အထက်မဂ်အထိအောင်ပဲ။ ထိုင်နေတုံးပြောတာ.. ဆရာတော်ကြီး ပြောထားတာတွေကို မှတ်သားပြီး ဆင်ခြင်တာလေ..။ ထိုင်ပြီးတော့မှ ငါ့နှယ် တမင်လုပ် ဆင်ခြင်နေပါလား သိတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဆရာတော်ကြီး တရားတွေကို နာခြင်းမှ ရပ်လိုက်တယ်။ နောက်တော့ သဘာဝရိပ်သာ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရနဲ့ ဆရာမ ချစ်မြတ်နိုး တရားတွေနာရင်း မှတ်တယ်။ ထိရောက်ပါတယ် စိတ်ပျံ့လွင့်မှု အတော်နည်းသွားတယ်။ ဟုတ်သလို ရှိပေါ့နော်… ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးပြီး အလွတ်ထိုင်ပြန်တော့ မကြာဘူး ဒုံရင်းကဒုံရင်း.. ဒါနဲ့ ဆရာတော်၊ ဆရာမ အကူအညီ ယူခြင်းကိုပါ စွန့်လိုက်တယ်။ ကိုယ်တကယ် မရဘဲနဲ့ ရသယောင် ဆက်မဖြစ် ခြင်တော့လို့။ အဲလို ရပ်လုိုက်တော့ ဘာဖြစ်လဲသိလား.. ဆက်ကို မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။။ ကွိ ကွိ.. မှားသလား မှန်သလား သေခါနီးမှ သိလိမ့်မယ် သဂျု တ်ဇီးရေ….
တရားနဲ့ ဝေးနေတဲ့ကျနော်ကတော့ ဘာမှ ၀င်မဝေဖန်လိုပါဘူး။
ကျနော်က တော့ အစွန်းရောက်တာကို တော့ လက်မခံ ပါဘူး
ဘယ်နေရာမဆို အသင့် အတင့် အလိုက်အထိုက် လောက်ဘဲ ပြောတာ ဆိုတာ နေတာ ထိုင်တာက သင့်တော်တယ်
ဦးနု စာအုပ် တွေကိုတော့ တစ်အုပ်မှ မဖတ်ဘူး ပါဘူး။
ဦးနု အကြောင်း ကိုတော့ (ဒေါ်)ခင်နှင်းယု ရဲ့ စာအုပ် တွေ က တစ်ဆင့် သိမိပါတယ်။
သူတို့ က အမျိုးတော်တယ် မဟုတ်လား။
(ဒေါ်)ခင်နှင်းယု က ဦးနု ရဲ့ ပီအေ တောင် လုပ်ခဲ့တာ လို့ သိပါတယ်။
ဝါးခယ်မ အကြောင်း ကိုလဲ သူ့စာအုပ်က မိတ်ဆက်ပေးတာ။
မဆီမဆိုင် (ဒေါ်)ခင်နှင်းယု ရဲ့ စာတစ်ပုဒ် မှာ
သူ တပ်ထဲ မှာ နေတုန်း မိုးရွာချိန် တပ်ထဲက ကလေးတွေ၊ ရဲဘော်လေးတွေ မိုးရွာထဲ ထွက်ပြီး ကြွေတဲ့ သရက်သီး တွေ ကို ကောက်ကြ၊ သစ်ကိုင်းကျိုး တွေ ကောက်ကြ တာ ကို သူက အိမ်ထဲကနေပြီး ကဲ့ရဲ့ နေမိတာ တဲ့။
ဒီလို သရက်သီးလေး၊ ထင်းလေးတစ်ချောင်း ရဖို့ မိုးရေထဲ ထွက်ကြသလားပေါ့။
နောက် သူ့ဟာသူ တွေးရင်း တွေးရင်း “တကယ်လို့ များ အခုရွာ နေတဲ့ မိုး က ရိုးရိုး ရေ တွေ မဟုတ်ဘဲ ရွှေမိုး၊ ငွေမိုး တွေ သာဖြစ်ခဲ့ ရင်
သူလဲ အခုကို အိမ်ထဲ မှာ ဣဒြေ ကြီး နဲ့ ထိုင်ပြီး သူများ တွေ ကို အပြစ်ပြောနိုင်ပါတော့ မလား။
သူကိုယ်တိုင် လဲ အပြင် ပြေးထွက်ပြီး ကောက်တော့ မှာပါ
ဆိုတာလေး ကို ရေးပြထားတာ
လူ တွေ ရဲ့ မသိစိတ် ကနေ မရိုးသားတတ်တဲ့ သဘော ကို ပုံ ပြပြီး လှောင်လိုက်တာ လေးမို့ သိပ်လှပါတယ်။
Post နဲ့ မဆိုင်တာတော့ မဟုတ် ဝါးခယ်မသူ အကြောင်းဘဲ ဟာနော်။
တရားထိုင်တာကတော့ တကဲ့ တရားအစစ် ဟောပြ နိုင်သူ နဲ့ အရင်ဆုံး တွေ့နိုင်ဖို့ အရေးကြီးသလားလို့။
ကိုယ့်ကိုယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ပြောင်းစိတ်လဲ တွေ၊ လောဘ ဒေါသ တွေ ကို ဘဲ အမှတ် လေး နဲ့ သိနေ ကြည့်နေနိုင် ပြီး အဲဒါတွေ ကို နဲ နိုင်သမျှ နဲ အောင် ကြိုးစားတတ်မယ် ဆိုရင် ကိုဘဲ လူ့ဘဝ မှာ နေရကျိုး နပ်နေပါသေး တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကလဲ သံသရာပြတ်ဖို့ ထက် သံသရာရှည်ဖို့ ပိုပြီး စိတ်သန် နေသေးတာမို့ တစ်ခြား သံသရာပြတ် ရှာချင်သူများ ကို ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး။
အကြောင်းအရာ တခုနဲ့စပ်ဆက်လို့ လက်ချာတခုမှာ ဆရာမပေါဒါ အမှတ်ရဒရယ်။ ရုပ်ရှပ်ထဲမှာ… မင်းဓါးက မင်းဒမီးကို အရက်ဘားမှာမေးဒရယ်.. တထောင်ပေးမဲ.. လိုက်အိပ်မလားပေါ့.. မင်းတမီးက သူ့ကို ဆိတ်ဆိုးပီး ဖာမဟုတ်ဘူး ဘာညာပေါ့.. ဒါနဲ့ ဒေါ်လာ တသန်းပေးလျင်ဂေါဆိုတော့ မင်းတမီး ဆိတ်ဆိုးပြေသွားဒရယ်…။ သူတပါးကို နှိမ်ချမြင်တတ်တဲ့သူများ.. ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဟုတ်ထင်နေသူများ ကိုယ်ကမှန်နေလျင်တောင် ဆင်ခြင်မိဖို့ပါ။ ငါကွ…
အဲ့လူကြီးရေးတဲ့ စာအုပ်တစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ပြီး..
. သဂျီး ပြောတာ လုံးဝဥသုံထောက်ခံတယ်။ ဦးနုကို သောက်ညင်အရမ်းကတ်တာ။ ဒါပေမယ့် သဂျီးပြောသလို ဦးနု အစိုးရထဖွဲ့ရင် နိုင်ငံတကာက လက်မခံဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါ့မလား။ ဦးနု က သူသာလျှင် ၀န်ကြီးဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာတုန်းက ထောက်ခံတဲ့ နိုင်ငံတွေ ၄၃ နိုင်ငံတောင် ရှိတယ်။ ဟိုးငယ်တုန်းက သတင်းစာဖတ်ပြီး မျှစ်ခေါင်းထဲ အဲဒီအချက် မှတ်မိနေတယ်။
.ဒီပို့စ်ထဲမှာ ဦးဦးပါ ပြောတာကိုလည်း bravo ပဲ။ အရမ်းကောင်း။ ဒါပေမယ့် မြင့်နေတော့ ကလေးတွေ နားလည်ပါ့ မလား။ ဘဘကြီး အကြောင်း ပြောတဲ့ ပထမကွန်မင့်ကိုပြောတာပါ။ ကလေးတွေ နားမလည်လောက်ဘူး။